घोप्टिएर मुखमा किस गरें - Nepali Sex Tube
घोप्टिएर मुखमा किस गरें
आज फर्केपछि बाटोमा माछा खाने, होटेलमा पुगेपछि काँचो मासुपनि खाने”, उनले दौडिरहेको मोटरसाईकलमा अझ अगाडी सरेर भनिन् । यसै नै बाईकको सिट मोडिफाई गरेर सिट उठाएको, उनी करिव मेरो सिटको चार भागको एक भागमै अगाडी सरेर आईन । यसो गर्दा उनको दुध मेरो ढाढमा अझै माढियो भने तल पुति मेरो पछाडीको चाकमा डाम्नेगरी आईपुग्यो ।
अँध्यारोको फाईदा उठाउँदै लाँडोमाथि सुमसुम्याउँदै पाईन्टमाथि नै भएपनि हल्का थिच्दै भनि, “अनि आफै त मन नगर्ने । हुन त घरमा भईसकेपछि हामलाई बानी पारेर तड्पाउने त हो नि” । सनसनाईरहेको लाँडोमा पाईन्टमाथि नै खेलाउँदै भनिन् ।”तीन महिना जति पो भएछ नी”, मैले भनें ।
“हो त । तीन महिना पनि कटिसक्यो । बानी परेपछि त कस्तो छटपट हुँदो रहेछ भने” ।
“त्यतिकै अफिसदेखि निस्कने कुरा पनि त भएन । मन त नभएको कहाँ हो र” ?
उनले टाउको मेरा पछाडीको कुममा राखिन् । यसो हुँदा झन् नजिक भईन् । उनको पुति र दुध झन् मेरो चाक र ढाढ माडियो । उनको हात चाहीँ मेरो लाँडोमा खेलिरहेकै थियो ।
मलाई पनि एक हातले बाईकको हयान्डिल समाएर अर्को हात पछाडी पुरयाएर उनको पुति लेगिज बाहिरभएपनि छुन मन लाग्यो । अलिक सजिलो बाटोमा आएपनि देब्रे हात हयाण्डलबाट हटाएर उनको पुति भएको खुट्टाको खापमा पुरयाएँ । टाईट लेगिज बाहिरै भएपनि उनको पुति सुमसुम्याएँ । उफ … भुक्क … उठेको …. नरम मासु नै मासुको पुति …. कति खेर काम सकेर होटेल दौडौं भयो । त्यति नै बेला पछाडीबाट मेरो गर्दनमा किस गरेर हल्का दाँत गाडिन् ।
उनलाई पनि हतारो रहेछ ।
ऋण समूहमा पुगेर आधा घण्टासम्म छलफल गरयौं । फर्कंदा झन् अँध्यारो भईसकेको थियो ।
“तीन महिना जति पो भएछ नी”, मैले भनें ।
उहीँ अघिकै जस्तो उनको दुध र पुति मेरो ढाढ र पछाडी बेस्सरी माढिने गरी बसिन् र एउटा हात मेरो लाँडोमा राखिन । अर्को हात मेरो छातीमा थियो । उनको तातो शास मेरो गर्धनमा पर्नेगरी चिउडो काँधमा राखिन् । घरी घरी उनको ओंठ मेरो गर्धनमा रगडिएको मैले राम्रै थाहा पाईरहेको थिएँ ।
“आज माछा नखाउँ । भोलिमात्रै खाउँ, हुन्न” ? मैले विस्तारै प्रस्ताव राखें ।
“अबुई, भोलिपनि यतै बस्ने हो र” ?
“यतै त बस्ने । फिल्डमा अर्को ३ वटा गाउँ जानुपर्छ । ठिक्क साँझ पर्दा आईपुग्नुपर्छ”, मैले भनें ।
“ला मैले त एकदिनमै कोठा फर्किन्छु भनेर घरधनीलाई पो भनेर आएको त ।”
“घर साहुनीलाई भोलि फोन गरे भईहाल्छ नी ।”
“र पनि त उता घरदेखि कोही आईपुगे ? भाई बहिनीहरु आउने कुरा थियो ।”
बाटो सजिलो ठाउँमा परेकोले मैले टाउको अलिक घुमाएर उनको ओंठ मेरो गालामा पुरयाएँ र भनें, “मोबिल फेर्ने हतार भयो क्या ।”
उनी बोलिनन् । सायद मलाईजस्तै उनलाई पनि हतार थियो ।
“कोठा पुगेर नुवाई धुवाई पनि गर्नै पर्छ”, मैले भने ।
“ल ठीक छ नि त बाबा रे”, उनले मेरो लाँडोमा थप खेलाउँदै भनिन् । मोटरसाईकल चाहीँ गुढिरहेकै थियो ।
होटेल पुगेर हतार हतार आ–आफ्नो कोठामा पस्यौं । नुहाई धुवाई गरेर १५ मिनेटपछि इन्टरकममा कुरा गर्ने सल्लाह भयो ।
१५ मिनेटपछि मैले इन्टरकममा कल गरें । उनले उनको कोठामा आउन भनिन् । म उनको कोठामा गएँ ।
कोठामा छिर्नासाथ “कता खाना खाने भनेर सोधिन् ।”
“पहिला शरिरको भोक मेटाउँ, अनि पेटको खाना त भईहाल्छ नी हुन्न ?” मैले भनें ।
“मलाई पनि तेस्तै लाग्यो । आज धेरै पानी (फुसी) बग्यो, मैले भनें । मेरो त छिटो झरयो ।”
“मलाई किन हो ? त्यो गरेको भन्दा तपाईंले चाटेको बेला झरेको थाहा हुन्छ । गरेको बेला त अस्ति त्यति दिन गर्दा पनि अलि अलि मात्र थाहा हुन थालेको थियो । आज पनि पछिमात्रै थाहा भयो ।” लुत्रुक्क परेको लाँडोलाई समाएर तलमाथि गर्दै भनिन् ।
घुँडा टेकेर चिकाचिक
काकीको गुलाबी पुति